Nyika inogona kukurumidza kuvhurazve maGreen Passport Holders
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Nyika inogona kukurumidza kuvhurazve maGreen Passport Holders
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Israel iri kushanda pasipoti yakasvibira. Iyi pasipoti inoratidza, muridzi akabayiwa jekiseni achipesana neCOVID-19, uyezve, inogona kunge iine chero ruvara.
Ipasipoti inodzivirira kugara kwayo wega muridzi uye kupa mukana kuzviitiko zvetsika, maresitorendi.
Ipasipoti yakasvibira yaizoitawo kuti vafambi vabhururuke mungarava vasina kutanga vaongororwa hutachiona, sezviri kudikanwa izvozvi.
Pasipoti yaizopihwa vhiki mbiri mushure mekunge muridzi agamuchira jekiseni rake rechipiri rekudzivirira.
Pachave neimwe nzira yakafanana yekudzivirira kadhi repasi rese iro rinogona kupa zvakanakira kubaiwa vaisrael vanoenda kunze kwenyika.
Ipasipoti yakasvibira inotarisirwa kupa kukurudzira kwakasimba, pamwe nemukana wekuti dzimwe nyika hadzitenderi maIsrael kushanya kunze kwekunge vangaratidza kuti vakabayiwa nhomba kupikisa COVID-19, chirevo chakadaro, ichidudza vakuru vehurumende.
Mutungamiriri wehurumende, VaBenjamin Netanyahu uye mukuru anoona nezvekudzivirira kwehutachiona nehurumende neSvondo vakati kutanga kwekudzivirira nhomba kuIsrael kuchasimudzwa kubva musi waDecember 27, nemishumo yenhepfenyuro yechiHeberu ichiti ichatanga Svondo rinouya.